(Redirected from Chapotera cheNhangande)
Nhangande Dzakadarikira[chinja | edit source]
Nhangande Dzakadarikira (transition elements) imhando yenhangande dzine deze (shell/orbital) rezasi risina kuzara asi rimwe deze riri kumucheto rizere nema electron anokwanamo. Nhangande Dzakadarikira dzine nhamba dzeHatomu dzinoti: 21–29, 39–47, 57–79, uye 89–107. Saka zita rokuti Nhangande Dzakadarikira rinobva pakuti dendera remukati igasva asi dendera rekumuchete rizere. Nickel imhando yenhangande yakadarikira.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Chapotera_cheNhangande_Dzakadevana&oldid=45027"
This page was last edited on 15 Chivabvu 2016, at 14:01.